Mayelana NATHI - Yongguang Line Equipment Co, Ltd.
SIYAYITHANDA I-HEBEI Yongguang
HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO., LTD. ibhizinisi eliphakeme lobuchwepheshe elikhethekile ekukhiqizeni, i-R&D nokuthengisa. Indawo i-Yongguang ikuyona "Idolobha Elikhulu Likagesi" elidumile eChina-Yongnian, umgwaqo weSizwe oseduze we-107, isikhumulo sezindiza i-Handan kanye nesiteshi sesitimela.
Inkampani eyasungulwa ngo-1995, singumkhiqizi ochwepheshe ku-Electric Power Fittings, ikakhulukazi emgqeni ofanelekile futhi ofanele ukufakelwa insimbi, ama-Composite Insulators, i-Arrester, iDrop-Out Fuse Cutout, Izinto zikagesi ezifana nokuhambisa amandla nemikhiqizo yokusabalalisa. Le fektri ithatha indawo eyi-8000m2, inabasebenzi abangaphezu kwama-200, kubandakanya nabasebenza ngochwepheshe abangama-40.
Ifektri inethimba lamandla obuchwepheshe obuqinile, ubuciko obuphambili, imishini yokuhlola ephelele.
Imikhiqizo yethu isidlulile ekuhlolweni nge-Power Fitting Test Lab yeECCP. Umkhakha wamandla kagesi- Isikhungo sokuhlola ikhwalithi yamandla kagesi kanye neXi'an HV Research Institute. Ikhwalithi ethembekile yemikhiqizo yethu nokusebenza okuhle ithole idumela elihle emakethe yasekhaya nangaphesheya. Ngaphandle kwalokho, sesidlulile isitifiketi se-CE, uhlelo lwe-ISO 9001, nengxenye yemikhiqizo yaze yathuthuka kwamanye amazwe aseYurophu naseMelika.
Imikhiqizo yethu ithunyelwe e-Asia, Oceania, North America, South America Middle East, Africa njll.
Ngokuphathwa kwamabhizinisi ajwayelekile, indlela yokusebenza eguquguqukayo kanye nensiza enhle kakhulu yokuthengiswa kokuthengisa, ukusungula izinto okuqhubekayo, yenza inkampani yethu isheshe ibe enye yamabhizinisi angenamandla kakhulu futhi amasha. Inkampani ibambelela kumgomo wokuthi "ikhwalithi impilo, isithunzi siyisisekelo", ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu kanye nensizakalo eyenelisayo.
Semukela ngemfudumalo abangane abavela kuwo wonke umhlaba ukuxoxa ngebhizinisi futhi babambisane nathi ekuthuthukiseni amandla omhlaba!